ပသခါပွဲခံချိန်အဲဂုတ္တုပြည်၌ကျွန်ခံနေရာကနေအစ္စရေး၏လှတျမွောကျခွငျးအထိမ်းအမှတ်။ ယုဒလူတို့သည်လည်းသိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောအနေဖြင့်ဘုရားသခင်ကလွတ်မြောက်လာခံရပြီးနောက်ဂြူးလူမြိုး၏မွေးဖွားဆင်နွှဲ။ ယနေ့ဂျူးလူမျိုးသည်သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်အဖြစ်ပသခါပွဲကျင်းပပေမယ့်ကျယ်ပြန့်အသိထဲမှာယုဒလူတို့အဖြစ်ကသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုဆင်နွှဲမသာ။
ဟီးဘရူးစကားလုံး Pesach "ကူး" ကိုဆိုလိုတယ်။ ပသခါပွဲစဉ်အတွင်းယုဒလူတို့အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူ သည့် Seder အဲဂုတ္တုပြည်၌ကျွန်ခံရာမှထှကျမွောကျရာနှင့်ဘုရားသခင်ရဲ့လှတျမွောကျခွငျး၏ retelling ထည့်သွင်းထားတဲ့, မုန့်ညက်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလမ်းအတွက် Seder အတွေ့အကြုံများတစ်ခုချင်းစီပါဝင်သူဘုရားသခငျ့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများနှင့်ကယျလှတျမှတဆင့်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုတစ်အမျိုးသားရေးအခမ်းအနား။
Hag HaMatzah (ဇုမပွဲ) နှင့် Yom HaBikkurim (ရမည်) နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဖျောပွထား ဝတ်ပြုရာကျမ်း သီးခြားပွဲတော်များအဖြစ် 23 ။ သို့သော်ယနေ့ယုဒလူတို့သည်ရှစ်ရက်ကြာပသခါပွဲကိုအားလပ်ရက်၏တစိတ်တပိုင်းအဖြစ်သုံးခုစလုံးပွဲတော်များကျင်းပ။
ပသခါပွဲကိုစတင် Nissan ကားများ၏ဟီဘရူးလ၏နေ့ 15 ရက်နေ့တွင် (မတ်လသို့မဟုတ်ဧပြီလ) နှင့်ရှစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌အဘို့နေဆဲဖြစ်သည်။ (:5ဝတ်ပြုရာကျမ်း 23), ပြီးတော့နေ့က 15 ရက်နေ့တွင်, အဇုမပွဲကိုစတင်မယ်လို့နှင့်ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးဆက်လက် (ဝတ်ပြုရာ 23: 6) ကနဦးပသခါပွဲကို Nissan ကားများတဆယ်လေးရက်နေ့တွင်ဆည်းဆာမှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ ပသခါပွဲ၏ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် ၏စာအုပ်တှငျမှတျတမျးတငျထား ထှကျမွောကျရာ ။ အဲဂုတ္တုပြည်၌ကျွန်ခံနေရာသို့ရောငျးလိုခံရပြီးနောက် ယောသပ်သည် , သား ယာကုပ်အမျိုးကို ဘုရားသခငျသညျအလှနျမင်္ဂလာရှိသောနေဖြင့်ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတော့သူကဒုတိယ-In-command ကိုဖါရောဘုရင်ထံသို့အဖြစ်မြင့်မားသောအနေအထားမှီ။
လေးရာနှစ်ကြာပြီးနောက်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်သစ်ကိုဖါရောမင်းသည်၎င်းတို့၏အာဏာကိုကွောကျရှံ့သောကြောင့်မြောက်မြားစွာ,2သန်းအရအေတှကျတစ်ဦးကလူသို့စိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ ထိန်းချုပ်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့သူကြမ်းတမ်းလုပ်အားနှင့်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ကုသမှုသူတို့နှင့်အတူညှဉ်းဆဲ, သူတို့ကိုကျေးကျွန်တို့ကိုလည်းလုပ်လေ၏။
တစ်နေ့မှာအမည်ရှိသောသူတယောက်ကတဆင့် တဖန်မောရှေအား ဘုရားသခငျသညျမိမိလူတို့ကိုကယ်နှုတ်ခြင်းငှါလာကြ၏။
ထိုအချိန်က မောရှေအားမွေးဖွားခဲ့သည်, ဖါရောဘုရငျအပေါငျးတို့သဟေဗြဲယောက်ျား၏အသေခံခြင်းအမိန့်ထုတ်ခဲ့ကြောင်း, ဒါပေမယ့်သူ့မိခင်မြစ်၏ဘဏ်များတစ်လျှောက်တောင်းထဲ၌သူ့ကိုဝှက်ထား၏တဲ့အခါမှာဘုရားသခငျသညျမောရှသေညျခမျြးသာရ။ ဖာရောဘုရင်၏သမီးကလေးတွေ့ရှိခဲ့နှင့်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အဖြစ်ထမြောက်စေတော်မူ။
နောက်ပိုင်းတွင်မောရှသေညျကိုအထပ်ထပ်မိမိလူတဦးရိုက်နှက်တစ်ခုအီဂျစ်သတ်ဖြတ်ပြီးနောက်မိဒျန်ပြေးကြ၏။ ဘုရားသခငျသညျမောရှေအားထင်ရှား မီးလောင်သောချုံ ငါသည်ငါ့ရောက်စေဖို့ဖါရောမင်းသည်သင်တို့ကိုငါရှိရာသို့ငါစေလွှတ်မည်။ ငါကသူတို့ခံစားမှုတွေကိုဂရုစိုက်, သူတို့ရဲ့အော်ဟစ်စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီ, ငါကသူတို့ကိုကယ်တင်ရန်လာကြပြီ။ ငါသည်ငါ၏လူတို့ဒုက္ခမြင်ကြပြီ "ဟုပြောသည် အဲဂုတ္တုပြည်ကလူ။ " (ထွက်မြောက်ရာ 3: 7-10)
ဆင်ခြေအောင်ပြီးနောက်တဖန်မောရှေအားနောက်ဆုံးတော့ဘုရားသခင့စကားကိုနားထောငျ။ ဒါပေမဲ့ဖါရောမင်းသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်သွားကြကုန်အံ့ရန်ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်စေလွှတ်တော် တစ်ဆယ်ဘေးဒဏ် သူ့ကိုဆွဲဆောင်စည်းရုံးဖို့။ နောက်ဆုံးဘေးနှငျ့ဘုရားသခငျသညျ Nissan ကားဆယ်နေ့၌သန်းခေါင်မှာအဲဂုတ္တုပြည်၌သေလွန်သောသူတို့သည်တိုင်းပထမဦးဆုံးဖွားသားဒဏ်ခတ်ဖို့ကတိပြုခဲ့သည်။
မိမိလူတို့ကိုနှမြောမည်ဖြစ်ကြောင်းအတိုင်းသခင်ဘုရားသည်မောရှေမှညွှန်ကြားချက်များပေးခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုဟီဘရူးမိသားစု, တစ်ဦးပသခါသိုးသငယ်ကိုယူသတ်ပြီးလျှင်, မိမိတို့နေအိမ်များတံခါးဘောင်ပေါ်မှာအသွေးအချို့နေရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဖျက်ဆီးအဲဂုတ္တုပြည်၌မကူးသည့်အခါသူသည်ပသခါသိုးသငယ်ကို၏အသွေးအားဖြင့်ဖုံးလွှမ်းအိမ်များမဝင်နိုင်လိမ့်မယ်။
သန်းခေါင်အချိန်၌, သခင်ဘုရားကိုအဲဂုတ္တုသားဦးအပေါင်းတို့ကိုဒဏ်ခတ်။ ထိုညဉ့်သည်ဖါရောဘုရင်သည်မောရှေကိုခေါ်, "ဟုငါ၏လူမျိုးကိုချန်ထားပါ။ သွားလော့။ " သူတို့ကအလျင်အမြန်ထွက်ခွာ၎င်း, ဘုရားသခင်၏ဧဒုံပင်လယ်ဆီသို့သူတို့ကိုလမ်းပြတော်မူ၏။ ရက်အနည်းငယ်ပြီးနောက်ဖါရောဘုရငျသညျမိမိစိတ်ကိုပြောင်းလဲလိုက်စားအတွက်မိမိတပ်ကိုစေလွှတ်။ , အီဂျစ်စစ်တပ်ဧဒုံပင်လယ်၏ဘဏ်များမှာသူတို့ကိုရောက်ရှိသောအခါ, ဟီဘရူးလူမျိုးကိုကြောက်ရွံ့ကြပြီးဘုရားသခင်နဲ့အော်ဟစ်ကြ၏။
တဖန်မောရှေအား "ကြောက်လန့်ခြင်းမရှိကြနှင့်။ မြဲမြံစွာရပ်နှင့်အသင်တို့သည်သခင်ဘုရားသည်ယနေ့ပို့ဆောင်မည်ကိုကယ်တင်ခြင်းကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ " ဖြေကြား
မောရှေသည်မိမိလက်ကိုဆန့ ်. , ပင်လယ်ကိုခွဲ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်လည်းကောင်းဘက်မှာရေနံရံတစ်ခုနှင့်အတူခြောက်သွေ့မြေပြင်ပေါ်မှာဖြတ်ကူးခွင့်ပြု။
အီဂျစ်စစ်တပ်နောက်တော်သို့လိုက်သောအခါ, ရှုပ်ထွေးမှုများသို့လှဲချခဲ့သည်။ ထိုအခါမောရှေသည်နောက်တဖန်ပင်လယ်နှင့်ပင်လယ်ပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်, တစ်ခုလုံးအားတပ်မတော်ကိုတယောက်မျှမကျန်ထွက်ခွာရှုံးခဲ့ပါတယ်။
လုကာ 22 ခုနှစ်, ယရှေုကမိမိနှင့်အတူပသခါပွဲခံခြင်း shared တမန်တော်များ သည်ငါ့ခံစားမှုတွေကိုစတင်မတိုင်မီငါသည်သင်တို့နှင့်အတူဤပသခါပှဲကိုစားရန်အလွန်စိတ်အားထက်သန်ကြပြီ "ဟု။ ငါက၎င်း၏အဓိပ္ပာယ်ကိုသည်အထိတဖန်ငါကဒီမုန့်ညက်ကိုစားမည်မဟုတ်ကြောင်းယခုသင်ပြောပြသည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၌မပြည့်စုံ။ " (လုကာ 22း15-16, NLT )
ယရှေုသညျပသခါပှဲ၏အပွညျ့စုံဖြစ်ပါတယ်။ သူဖြစ်ပါတယ် ဘုရားသခငျ၏သိုးသငယ်သည် အပြစ်တရားမှကျွန်ခံရာမှအခမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတင်ထားရန်ယဇ်ပူဇော်ကြ၏။ (ယောဟန် 1:29; ဆာလံ 22; ဟေရှာယ 53) ယေရှု၏အသွေး ကိုဖုံးခြင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ပေးသည်, သူ၏ခန္ဓာကိုယ်အားထာဝရသေခြင်းတရား (1 ကောရိန်သု 5: 7) မှကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်မြောက်စေရန်ကျိုးပဲ့ခဲ့သည်။
ဂျူးအစဉ်အလာထဲမှာ, Hallel အဖြစ်လူသိများချီးမွမ်းတဲ့ဓမ္မသီချင်းပသခါပွဲကို Seder စဉ်အတွင်းသီဆိုနေသည်။ မေရှိယကို၏စကားပြော, 22: အထဲတွင်ဆာလံ 118 ဖြစ်ပါတယ် "။ ဆောကျလုပျပယ်ချကျောက် capstone ဖြစ်လာသည်" (ထို) တစ်ခုမှာရက်သတ္တပတ်ကသူ၏မသေမှီ, ယရှေုသညျဆောကျလုပျပယ်ချခဲ့သောကျောက်ခဲ့ကြောင်းမဿဲ 21:42 ပြောကြားခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်သည်မိမိကိုဂုဏ်ပြုရန်စီစဉ်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်အမိန့်တော်အတိုင်း ကြီးစွာသောကယ်တင်ခြင်း ပသခါပှဲကတဆင့်အမြဲ။ ယေရှုခရစ်အားဖြင့်တော်ကိုအစဉ်မပြတ်ယဇျပူဇျောမှတ်မိဖို့ကသူ့နောက်လိုက်တွေကိုညွှန်ကြား အဆိုပါသခင်ဘုရား၏ပွဲတော်မင်္ဂ ။
ယုဒလူတို့သည် Seder မှာစပျစ်ရည်လေးခွက်သောက်ပါ။ တတိယခွက်ခွက်ကိုလို့ခေါ်ပါတယ် ရွေးနှုတ် ခြင်း, စဉ်အတွင်းယူသောစပျစ်ရည်၏တူညီသောခွက်ကို နောက်ဆုံးညစာစားပွဲ ။
ယင်းမုန့် နောက်ဆုံးညစာစားပွဲ ပသခါပွဲ၏ Afikomen သို့မဟုတ်အလယ်မှာဖြစ်ပါတယ် Matzah နှစ်ခုအတွက်ဆွဲထုတ်ကျိုးပဲ့သော။ ဝက်အဖြူပိတ်ချောကိုပတ်ရစ်နှင့်ဝှက်ထားလျက်ရှိ၏။ အမြိုးသားတို့အဖြူပိတ်ချောကိုတဆေးမဲ့မုန့်ကိုရှာနှင့်မည်သူမဆိုတွေ့ပါကစျေးနှုန်းအဘို့ရွေးနှုတ်တော်မူခံရဖို့ပြန်တတ်၏။ မုန့်ကိုအခြားဝက်ဘောဇဉ်အဆုံးသတ်စားဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါပြင်ဆင်ထားရန်မည်သို့မည်ပုံလေ့လာပါ ပသခါပွဲကို Seder ပြား ။
ဓမ်မဟောငျးကမျြး: ထှကျမွောကျရာ 12; တောလည်ရာ 9: 1-14; တောလည်ရာ 28: 16-25 ကတခွား; တရားဟောရာကျမ်း 16: 1-6; ယောရှုသည် 5:10;2ဓမ္မရာဇဝင် 23: 21-23;2ရာဇဝင် 30: 1-5, 35: 1-19; ဧဇရ 6: 19-22; ယေဇကျေလ 45: 21-24 ။
ဓမ္မသစ်ကျမ်း: မဿဲ 26; မာကု 14; လုကာ 2, 22; ယောဟနျ 2, 6, 11, 12, 13, 18, 19; 4; 12: တမန်တော် 1 ကောရိန်သု 5:7။
မကောင်းဆိုးဝါးနှိမ်နင်းဖို့တစ်ဦးက Beginner ရဲ့လမ်းညွှန်
ယာကုပ်၏ Ladder သမ်မာကမျြးပုံပြင်လေ့လာမှုလမ်းညွှန်
ယေရှုခရစ်၏ 12 တပည့်ကိုသိမှ Get
အဆိုပါ 50s ၏ 10 အကောင်းဆုံးရော့ခ် Instruments
အဆိုပါ Sussex Pledge (1916)
Awesome ကိုမတ်ေတာသ Quotes
မိသားစုသမိုင်းထုတ်ဝေ & Demand ကိုန်ဆောင်မှုများအပေါ်ပုံနှိပ်ပါ
အဘယ်ကြောင့် World Trade Center ကိုမျှော်စင် 9/11 ပေါ်မှာလှဲ
အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ကျောင်းသားများ, K သည်-12 အခမဲ့အွန်လိုင်းပြည်သူ့ကျောင်းများများစာရင်း
အင်္ဂလိပ် Grammar အတွက် Deverbal Noun နှင့်နာမဝိသေသန
သင့်ရဲ့နေအိမ် Restoring ခင်မှာ6မတ်လုပ်ငန်းများ
ထိပ်တန်း 10 Led Zeppelin သီချင်းများ
ထိပ်တန်း6"ဘုရင်ကလီယာ" Themes: ရှိတ်စပီးယား
အဆိုပါ Horsehead Nebula: တစ်ကျွမ်းတဝင် Shape နှင့်အတူတစ်ဦးကအမှောင်တိမ်တိုက်
အဘယ်သူသည် Jigsaw ပဟေဠိတီထွင်?
လေ့ဟင်စကား: အတားအဆီး, ချပစ်နှင့် Hurtle
ဒါဟာအောက်ဖက် မှစ. လာ! - အဆိုပါ 20 အကောင်းဆုံးဧရာတိရိစ္ဆာန်ထိတ်လန့ရုပျရှငျမြား
မင်နီဆိုတာပြည်နယ်တက္ကသိုလ် Moorhead အဆင့်လက်ခံရေး